Iindaba -Bamba la manqaku alishumi ukuze uqiniseke ngokuphila ixesha elide
Bamba la manqaku alishumi ukuze uqinisekise ngokuphila ixesha elide
Ukuthwala iikhetshi, ukwaphuka lolona luvo lunzima. Ke ngoko, ngokokuqonda ukukuxelela malunga nezinto eziqhelekileyo zokuthwala ukwaphuka kwekheji, ukuziqonda ezi zinto, kunokwenza wonke umntu alondolozwe ngcono xa usebenzisa ikheji ethweleyo, ukuze ubomi bokuthwala bube bude. Bamba la manqaku alishumi ukuqinisekisa ubomi obude benkonzo yokuthwala ikheji-izinto eziqhelekileyo zokuthwala ukwaphuka kwekheji:
1. ukuthambisa ukuthambisa ajikeleze
Iibheringi zibaleka zikwimeko ecekeceke, kwaye kulula ukuyila ukunamathela kokunxiba, okuwohloka imeko yendawo yokusebenza. Iinyembezi ezibangelwa kukuncamathela kokunxiba ngokulula zingena ehokweni, zibangela ukuba ikheyiji ivelise umthwalo ongaqhelekanga, onokuthi ubangele ukuba ikheyi yaphulwe.
2. Ukuthwala isenzeko esirhubuluzayo
Into ehamba ngokuthambeka yeminwe emininzi, xa ukuphazamiseka komphezulu womlinganiso ungonelanga, indawo yokulayisha iya kwicala elirhangqileyo ngenxa yokutyibilika, kukhokelela kwinto yokuba isuntswana lihamba lihambelana neshafti okanye iqokobhe kwicala elijikelezayo .
3. Umthwalo ongaqhelekanga wekheji
Ukufakwa okungonelanga, ukuthambeka, ukuphazamiseka okugqithileyo, njl.njl. Kunokubangela ukunciphisa ukucocwa ngokulula, kuyandisa ukungqubana kunye nobushushu, kuthambise umphezulu, kunye nokukrola okungaqhelekanga kwenzeka ngaphambi kwexesha. Njengokuxobuka kusanda, ukuxobuka izinto zangaphandle kungena ezipokothweni zekheyiji, kukhokelela kwikheyiji Umsebenzi ulibazisekile kwaye umthwalo owongezelelweyo wenziwe, nto leyo ebangela ukuba ukunxiba kwekheyiji kuqhubeke. Ukonakala okunjalo komjikelo kunokubangela ukuba ikheyi yaphuke.
4. Izinto ezineziphene zokuthwala ikheyiji
Ukuqhekeka, ukufakwa kwesinyithi esikhulu sangaphandle, imingxunya yokuncipha, amaqamza omoya, kunye neziphene zeriveting azikho izipikili, iinzipho zepali, okanye izikhewu kwindawo edibeneyo yeziqingatha ezibini zekheji, kwaye ukonzakala kakhulu kwe-rivet kunokubangela ukuba ikheyi yaphuke.
5.Ukungenelela kwemicimbi yelizwe langaphandle kwiibheringi
Ukuhlaselwa kwemicimbi yelizwe langaphandle enzima okanye ezinye izinto ezingafunekiyo kuya kwenza mandundu ikheyiji.
6, ikheji iyaqhekeka
Oonobangela abaphambili bomonakalo zezi: ikheyi iyangcangcazela ngokukhawuleza okukhulu, ukunxiba kunye nemizimba yangaphandle ivaliwe.
7, ikheji inxiba
Gqoka kwikheyiji kunokubangelwa kukuthamba okungonelanga okanye amasuntswana erhabaxa.
8, umzimba wangaphandle uvala kuhola wendlela
Iziqwenga zamaphepha okanye ezinye izinto ezilukhuni zinokungena phakathi kwekheyiji kunye nomzimba oqengqelekayo, kuthintela le yokugqibela ukuba ijikeleze malunga ne-axis yayo.
Xa ukuthwala kungcangcazela, amandla angenawo amandla angangokuba makhulu kangangokuba abangele ukukhathala, kuze kuthi kungekudala kubangele ukuba ikheyi yaphuke.
10.Ukuthwala kujikeleza ngokukhawuleza okukhulu
Ukuba ukuthwala kuhamba ngokukhawuleza kunesantya sokuyilwa kwekheyiji, i-inertia enamava ekhejini inokubangela ukuba ikheyi yaphulwe.